भक्तपुर ६ र ७ मा नेमकिपा, सूर्यविनायक ४ मा एमाले विजयी - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भक्तपुर ६ र ७ मा नेमकिपा, सूर्यविनायक ४ मा एमाले विजयी
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार May 19, 2017
भक्तपुर, ५ जेठ – भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४ को वडाध्यक्षसहितको प्यानलमा एमालेले जित हासिल गरेको छ । वडाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार उत्तम थापाले एक हजार ४४३ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका देवीप्रसाद न्यौपाने एक हजार ४४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
एमालेबाट महिला सदस्यतर्फ तारा सापकोटा खतिवडा, दलित महिला सदस्य पम्फा परियार, सदस्य राजु लुबञ्जार श्रेष्ठ र देवलाल राजथला विजयी हुनुभएको छ ।
त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका–६ र ७ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारको प्यानल विजयी भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका–६ मा अध्यक्षमा नेमकिपाका हरिराम सुवालसहितको प्यानल विजयी भएको छ । सुवालले दुई हजार ५३० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकाका रमेश राजचलले ३४३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
महिला सदस्यमा रोशनमैयाँ सुवाल, दलित महिला सदस्यमा सीतादेवी नेपाली, सदस्यहरुमा गाविन्द दुवाल र सिद्धिराम अवाल विजयी हुनुभएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिका–७ को वडाध्यक्षमा नेमकिपाको उकेश कवाँको प्यानल विजयी भएको छ । कवाँले तीन हजार नौ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका शिवलाल बालाश्रेष्ठले ७७६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । महिला सदस्यमा रञ्जना त्वाती, दलित महिला सदस्यमा रजनी कपाली, सदस्यहरुमा हरिरत्न गोर्खाली र हेरा ख्याजू विजयी हुनुभएको छ । रासस
पत्रकारसँग किन आक्रोसित भए मेयर चौधरी? नेकपाले उनलाई के कारबाही गर्ला ?
काठमाडौं । सुनसरीको इटहरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले मंगलबार इटहरीका पत्रकार विराट अनुपमलाई फोनमा […]
चिकित्सा शिक्षा ऐन : संसदले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको छ। संसदले हटाएको बुँदा […]
नेकपा नेताको जिम्मेवारी तोकिंदै, कसलाई के जिम्मेवारी ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले पार्टी एकताको एक वर्षपछि केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन गर्दैछ । यसका लागि […]